တနင်္သာရီနှင့် ပုလောမြို့နယ်၌ မိုးသက်လေပြင်းများ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ်များ ပြိုကျမှုဖြ - Yangon Media Group
တနင်္သာရီနှင့် ပုလောမြို့နယ်၌ မိုးသက်လေပြင်းများ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ်များ ပြိုကျမှုဖြ
တနင်္သာရီ၊ ဧပြီ ၃
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့ နယ်တွင် ရုတ်တရက်မိုးသက်လေ ပြင်းကျရောက်မှုကြောင့် တနင်္သာ ရီမြို့နယ် သာရဖုံကျေးရွာအုပ်စု၊ အရှေ့သာရဖုံကျေးရွာရှိ တနင်္သာရီမြစ်ကမ်းနံဘေးမှ လူနေအိမ် တစ်လုံးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီ ၂ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရုတ်တရက်မိုးသည်း ထန်စွာရွာသွန်းပြီး မိုးသက်လေပြင်း များကျရောက်မှုကြောင့် တနင်္သာ ရီမြို့နယ် သာရဖုံကျေးရွာအုပ်စု၊ အရှေ့သာရဖုံကျေးရွာ မြစ်ကမ်း နံဘေးတွင်နေထိုင်သော ဦးမျိုးညွန့် (၄၇)နှစ်၏ မျောတိုင်ဖြင့်ဆောက် လုပ်ထားသော အလျားပေ ၃ဝ၊ အနံပေ ၂ဝ၊ အမြင့် ၁၂ ပေရှိ ထရန် ကာ၊ ဓနိမိုး၊ ပျဉ်ခင်းနေအိမ်တစ် လုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ များထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါနေအိမ်တွင် မိသားစု ဝင် အမျိုးသားလေးဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့နေထိုင်ပြီး နေအိမ် ပြိုကျမှုကြောင့် လူများထိခိုက်ဒဏ် ရာရမှုမရှိဘဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး မှာ ငွေကျပ် ၅ဝဝဝဝဝ ခန့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါနေအိမ်ပြိုကျမှုဖြစ် ပွားရာသို့ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးဌေးအောင်၊ အရန်မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများက စုပေါင်းကူညီ ပေးခဲ့ကြသည်။ အလားတူ ဧပြီ ၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲက ပုလောမြို့နယ်၊ ပလမြို့ အမှတ်(၁/၂/၃/၄)ရပ်ကွက်နှင့် ဇရပ်ဆိပ်ကျေးရွာတို့တွင် ရုတ်တ ရက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မိုးသက်လေပြင်းများတိုက်ခတ်မှု ကြောင့် သစ်ပင်လဲကျခြင်းများ ကြောင့် လူနေအိမ်ကိုးလုံး ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။
သစ်မှောင်ခို၊ မူးယစ်ဆေး၊ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုနှင့် လူမှောင်ခိုလုပ်ပြီး ဘယ်သူတွေ စီးပွားရ?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့သည့် အမှိုက်သိမ်းယာဉ်၊ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဥ
မြန်မာ – အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ယခုနှစ်တွင် ကုန်တင်ပို့ရောင်းခ?
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည့် စတူးဝပ်ပီးယာ့စ်